Kaadhka SD ee MacBookga cusub ee Apple wuxuu taageeraa xawaaraha UHS-II ilaa 312 MB/s | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Kaadhka SD ee MacBookga cusub ee Apple wuxuu taageeraa xawaaraha UHS-II ilaa 312 MB/s
Kaadhka SD ee MacBookga cusub ee Apple wuxuu taageeraa xawaaraha UHS-II ilaa 312 MB/s
Buugaagta xusuus-qorka ee MacBook Pro ee dib loo habeeyay ee Apple waxay raali gelisaa sawir qaadayaasha, tifaftirayaasha fiidiyowga iyo xirfadlayaasha kale ee hal abuurka leh iyagoo dib u soo celinaya booska kaadhka SD ee anfacaya oo ay la socdaan dekedaha kale ee I/O. Apple ayaa xaqiijisay in booska kaadhka SD ee MacBook Pro-ga cusub uu la jaan qaadayo nidaamka UHS-II inkasta oo aanu taageersanayn heerka UHS-III ee ugu dhaqsaha badan.
Kaadhka SDXC ee MacBook Pro wuxuu la jaan qaadayaa heerka UHS-II
UHS-II waxay taageertaa akhrinta iyo qorista xawaaraha ilaa 312MB/s
Faa'iidooyin hal abuur leh ayaa hadda si dhakhso leh u wareejin kara faylasha markaad socoto
Adapter looma baahna, kaliya kaarka SD UHS-II ku habboon
Bidix ilaa midig: Kaarka SD, USB-C iyo HDMI | Muuqaalka Sawirka: Apple
Intee ayuu dheereeyaa booska kaadhka SD ee 2021 MacBook Pro?
Marka loo eego qeexitaannada farsamada rasmiga ah ee moodooyinka 2021 ee MacBook Pro ee ay Apple ku dhawaaqday inta lagu gudajiray soo saaristeeda wax soo saarkeeda "aan la shaacin" oo la qabtay Isniintii, Oktoobar 18, 2021, buug-yarahaan waxaa lagu qalabeeyay hal boos oo SDXC ah oo loogu talagalay kaararka xusuusta.
Apple ayaa u xaqiijiyay Verge's Dan Seifert in labadaba buug-yaraha cusub - moodeelka 14-inch iyo dhiggiisa 16-inch - ay taageerayaan borotokoolka UHS-II, Seifert ayaa ku sheegay Twitter-kiisa, laakiin maaha UHS-III ugu dhaqsaha badan. Tani waxay ka dhigan tahay booska kaadhka SD ee buug-yaraha wuxuu bixiyaa taageero kaadhadhka xusuusta degdegga ah, oo u oggolaanaya wareejinta faylalka degdega ah ee u dhexeeya aaladaha.
Apple ayaa noo xaqiijisay in booska kaadhka SD ee MacBook Pro 14/16 ee cusub uu yahay UHS-II (in ka badan 300Mbps). Uma jeedo sidii hore ee UHS-III (in ka badan 600Mbps) noqon lahayd, laakiin ilaahay mahadii ma aha UHS-I (qiyaastii 100Mbps) . https://t.co/MN1ZCLyC4T
- dan-dor the relentless (@dcseifert) Oktoobar 19, 2021
Kaarka SD-ga caadiga ah (UHS-I) wuxuu gaarayaa akhrinta iyo qorista xawaarihiisa ilaa boqol megabyte ilbiriqsikii. Kaarka SD UHS-II waafaqsan, si kastaba ha ahaatee, milkiilayaasha buug-yarahaan cusub ee Apple waxay ku raaxaysan karaan xawaaraha wareejinta ilaa 312 megabyte ilbiriqsikii.
Si loo caddeeyo, 2021 MacBook Pro wuxuu taageerayaa heerarka kaadhka xusuusta SD ee soo socda:
SD (caadi ah): 12.5 megabytes ilbiriqsikii
HS (xawaaraha sare): 25 megabytes ilbiriqsikii
UHS-I (Xawaare Sare I): 104 megabytes ilbiriqsikii
UHS-II (Xawaare Sare II): 312 megabytes ilbiriqsikii
2021 MacBook Pro ma taageerayo xawaarahan wareejinta:
UHS-III (Xawaare Sare III): 624 megabytes ilbiriqsikii
HC (SD Express): 985 megabytes ilbiriqsikii
XC (SD Express): 1.97 gigabytes ilbiriqsikii (1970 megabyte ilbiriqsikii)
UC (SD Express): 3.94 gigabytes ilbiriqsikii (3940 megabyte ilbiriqsikii)
2021 MacBook Pro ma taageera UHS-III?
Mar labaad, MacBook Pro-ga cusub ma taageerayo heerka UHS-III ee ugu dambeeyay kaas oo ballanqaadaya xawaaraha wareejinta in ka badan 600 megabyte ilbiriqsikii. Tani maahan wax weyn maadaama UHS-III aysan wali si buuxda u qaadan kuwa sameeya kamarada. Sidoo kale, aad ayay kuugu cadaadi doontaa inaad hesho kaararka UHS-III duurka dhexdiisa. Akhri: Talooyinka bilowga ah ee isticmaalka macOS Finder
Waa kuwan awoodda kaydinta ugu badan ee ay taageerayaan kaadhadhka xusuusta ee SD:
SDXC: 2 terabyte
SDUC: 128 terabyte
Macluumaad dheeri ah, booqo bogga MacBook Pro ee bogga Apple.
Waa maxay sababta ay muhiim u tahay in la haysto booska kaadhka SD
Waxaad ku isticmaali kartaa booska SDXC ee MacBook Pro-gaaga si aad u siiso buug-yaraha awoodda kaydinta dheeraadka ah ee korka iyo ka baxsan kaydinta flash-ka ee ku dhex jirta. Iyo dadka u baahan inay si degdeg ah u wareejiyaan faylal waaweyn, kaarka SD ayaa aad uga wanaagsan fadhiga iyo sugidda illaa fayl-gagabyte-ga badan uu dhammeeyo gelinta Dropbox ama adeegga kaydinta daruuraha la midka ah.
Sug, waxaan maqlay inaad leedahay, anigu ma ihi prof! Is deji, kaararka SD waxaa loogu talagalay qof kasta oo u baahan inuu ku wareejiyo faylalka aaladaha dhexdooda si fudud, ma aha oo keliya tafatirayaasha fiidiyowga, fannaaniinta iyo sawir qaadayaasha.
MacBook Pro ee dib loo habeeyay waxa uu ku yimaadaa laba dhadhan: qaab 14-inji ah iyo mid 16-inch ah, oo labaduba ay ku raran yihiin dekedo. Marka laga reebo booska kaadhka xusuusta ee aan soo sheegnay, mashiinadani waxay sidoo kale la yimaadaan deked HDMI 2.0 ah oo ku dhex dhisan, dekedaha Thunderbolt 4, jack taleefoon 3.5mm ah oo taageera taleefoonnada gacanta-sare iyo ku dallaca magnetka iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada MagSafe.
Twelve South waxay soo saartaa qaabka PowerPic, dabeylaha wireless-ka oo dib loo habeeyay iyo qaab sawireed
7 Hababka ugu Wacan ee Iibsashada Magaca Domain Wanagsan